5 Top Tips For Brisbane By Train | Save A Train
musha > Rovedza Kufamba Matipi > 5 Top Tips For Brisbane By Train
Brisbane ndiye Queensland kuti guta uye inopiwa A-pasi zvinokwezva kufanana Sea World, ari patsangadzi akanaka uye nemapindu South Bank, uye Nhau Bridge, uye zvimwe zvakawanda - Australia chakarebesa cantilever zambuko.
Zvinonyaradzawo guta rokusika, ne unyanzvi mamiziyamu uye namaberere uye chic cafes aplenty, ndinoiitawo ndicho springboard hwakakwana Gold Coast mahombekombe, gungwa, uye surf.
Kana uri haasaruri kudzidzisa Travel, njanji hurongwa ndivo musimboti veguta senga kwezvivako uye nemagariro nhoroondo.
Saka kana uchida kuona Brisbane nechitima, pano vari pamusoro mazano mashanu.
Zvayaiva pamusoro North Coast mutsetse, Central Station ndiro guta Network racho chikuru chiteshi uye riri Bang mumoyo nechepakati mabhizimisi reruwa Brisbane raMwari.
Inovhurwa shure 1889, ayo klassiske France haatarisi Anzac Square uye ndicho tsinga huru kuti nzira yokushumira kweQueensland uye navamwe Australia.
Kana uchida lodgings pedyo, Oaks Charlotte Towers Hotel iri terrific Sarudza - zviri prohibitively kwete zvinodhura uye zvemhando yepamusoro Inn tisangoti muguta Skyline.
Brisbane Metro haisati operative - asi mukanyiwa nokukurumidza kupfuura nemunyika hurongwa anonyatsokwanisa mari, kuvakwa inotangira nomwoyo gore rino uye chinofanira kuzarura kuruzhinji kuburikidza 2023.
pa 21 makiromita refu, richafa kushumira 18 zviteshi mukati meguta, uye vagari uye vashanyi zvakafanana vachakwanisa kusvetukira uye kure sezvo ivo kufadza.
Zviri kukudyira miriyoni A $ 944, asi zvinobatsira zvinosanganisira akaderedza kuzara uye zvishoma kumanikidza beleaguered mabhazi Brisbane raMwari.
Chiutsi Train Sunday
Kana uchida Nokufema kubva kare (nzira dzinopfuura imwe), musoro Brisbane raMwari Roma Street Station nokuti dzose Chiutsi Train Sunday chiitiko.
Step mukati genteel yematanda ngoro uye iwe unenge pakarepo kutakurwa shure kune mamwe yakashongedzwa munguva, sezvo iwe nemhuri yako Chug pamwe yapfuura Brisbane raMwari vakawanda yevedza nzvimbo.
Zvinonakidza kwemakore ose, asi vana uye vakwegura vari kunyanya Ugare ne nemazango ayo.
Ipswich iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweBrisbane metropolitan nzvimbo uye ndiko kwaunowana inoshamisa Workshops Rail Museum.
Ndicho chinhu dyidzana uye kurudziro nhaka ruzivo muNzvimbo rokuAustralia wedangwe njanji okudhindira uye rakazara isingawanzowanikwi hwemvura locomotives, kura maindasitiri michini, uye multi-nevezvenhau Exhibits.
Kana uchida chinhu dzidzo uye rinofadza karwendo vose mhuri, tarisa mberi.
Brisbane nhandare yendege chinhu ndakabatikana chokufambisa nomusimboti iri huvandudzike ne cafes vakaita Fonzie Abbot, mabhawa akaita seTransit Tavern, uye kupaka rinobatsirwa kufanana Looking4.com.
Asi nokuda adventurers vazhinji vanosvika nendege, yakanaka chinhu pamusoro zviri Airtrain, ari 13 kiromita Republic njanji mutsetse kuti chave nokukurumidza spiriting vafambi kubva yendege kuna Central Station kubva 2001.
Pashure unonetesa ndege, Airtrain anotakura iwe kuguta centre chete 20 maminitsi - runako hunoshamisa.
Kutevera mazano edu shanu yokufambisa Brisbane nechitima uye iwe Tichafamba mudambudziko kuti wakanaka zororo.
Une mazano nokuda Brisbane chitima kufamba? Kugoverana navo mhinduro chikamu uye kana iwe vanoda chitima Save A chitima.
Unoda embed yedu Blog pambiru zviende yako nzvimbo, unogona kana kutora mapikicha edu uye rugwaro uye chete tipei chikwereti ane Link kuti ichi Blog romukova, kana iwe tinya pano: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftips-brisbane-train%2F%3Flang%3Dsn - (Mupumburu pasi zvishoma kuona Embed Code)
#brisbane #railtips australia Brisbane by train chitima mazano